Waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Xubnaha guddiga Qaran ee qaban qaabada xuska maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo & Hay’adaha Amniga dowladda Federaalka Soomaaliya. Kulanka oo uu shir guddoomiyay Wasiirka Warfaafinta XFS ahna Guddoomiyaha guddiga Qaran ee qaban qaabada xuska maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo Cismaan Obokar Dubbe ayaa looga hadlay sidii loogu diyaar garoobi lahaaxuska Maalmaah Corriyada. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud e dalka gaar ahaan Caasimadda inta ay socdaan munaasabadah maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo oo lagu qabanayo Magaalada Muqdisho. Xubnaha Guddiga Qaran ee qaban qaabada xuska maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo ee uu Magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa waxaa ay ku guda jiraan qaban qaabadii ugu dambeeyeysay ee munaasabada xuska Maalmaha Xorriyada oo maalmo koban inaga xigaan. | Banaadir Times
HomeWararWaxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Xubnaha guddiga Qaran ee qaban qaabada...
Waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Xubnaha guddiga Qaran ee qaban qaabada xuska maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo & Hay’adaha Amniga dowladda Federaalka Soomaaliya. Kulanka oo uu shir guddoomiyay Wasiirka Warfaafinta XFS ahna Guddoomiyaha guddiga Qaran ee qaban qaabada xuska maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo Cismaan Obokar Dubbe ayaa looga hadlay sidii loogu diyaar garoobi lahaaxuska Maalmaah Corriyada. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud e dalka gaar ahaan Caasimadda inta ay socdaan munaasabadah maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo oo lagu qabanayo Magaalada Muqdisho. Xubnaha Guddiga Qaran ee qaban qaabada xuska maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1-da Luulyo ee uu Magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa waxaa ay ku guda jiraan qaban qaabadii ugu dambeeyeysay ee munaasabada xuska Maalmaha Xorriyada oo maalmo koban inaga xigaan.
Previous articleAl-Shabaab oo weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamo Kenyan ah
Next articleDuqa Muqdisho oo digniin kasoo saaray Kooxaha dhaca geysta